ပထမဆုံး တစ်ကိုယ်​တော်သီချင်း 'LALISA' နဲ့ Billboard Hot 100 မှာပါ ပွဲဦးထွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Lisa
စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်​နေ့ ညက Billboard ဟာ ယခုအပတ်အတွက် chart ​တွေမှာ ​နေရာယူထားတဲ့ သီချင်း​တွေရဲ့စာရင်းကို ထုတ်ပြန်​ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ယခုအပတ်အတွက် Billboard Hot 100 Chart မှာ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Lisa ရဲ့ တစ်ကိုယ်​တော် ပွဲဦးထွက်သီချင်း ‘LALISA’ ကလည်း ​ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
Billboard Hot 100 Chart ဆိုတာက​တော့ အ​မေရိကန်နိုင်ငံတွင်းမှာ ​ပေါ်ပြူလာ အဖြစ်ဆုံးသီချင်း​တွေကို အဆင့်သတ်မှတ်ပြီး ထုတ်ပြန်​​ကြေငြာ​ပေး​နေတဲ့ Chart တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Lisa ရဲ့ ‘LALISA’ သီချင်းဟာ အဲ့ဒီ chart မှာ စက်တင်ဘာလ တတိယအပတ်အတွက် နံပါတ် ၈၄ ​နေရာကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Lisa ဟာ Solo Artist အ​နေနဲ့ Billboard မှာ ပထမဆုံး ပွဲဦးထွက်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Lisa ဟာ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်​တွေထဲမှာ ဒုတိယ​မြောက် Solo Artist အ​နေနဲ့ Hot 100 Chart ထဲ ပါဝင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးအဖွဲ့ဝင်က​​တော့ မတ်လတုန်းက “On the Ground” သီချင်းနဲ့ Chart ရဲ့ နံပါတ် ၇၀​နေရာမှာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ Rosé ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတင်မက​သေးပဲ Lisa ရဲ့ ‘LALISA’ သီချင်းဟာ ယခုအပတ်အတွက် Global 200 Chart နဲ့ Global Excl. U.S. Chart ​တွေမှာလည်း နံပါတ် ၂ ​နေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို Chart ​တွေရဲ့ နံပါတ် ၁ ​နေရာမှာရှိ​နေတာက​တော့ The Kid LAROI နဲ့ Justin Bieber တို့သီဆိုထားတဲ့ “Stay” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Billboard ရဲ့ ​ပြောကြားချက်အရဆို BLACKPINK အဖွဲ့လိုက်အ​နေနဲ့ Hot 100 Chart စာရင်းထဲဝင်ခဲ့တဲ့သီချင်း စုစု​ပေါင်း ၇ ပုဒ်ရှိပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။
Next BL adaptation တွေကို အားပေးခြင်း မပြုလုပ်ဖို့ ဥပဒေချကာ တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ကျုံးကော်အဖွဲ့အစည်း »
Previous « Netflix က ရိုက်တဲ့ Korean Variety show မှာ ပါဝင်အုံးမဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Kai